Gopi Krishna Dhungana (Pathik) : February 2014
शिवदर्शन गर्न नौ घन्टा
शिव दर्शनका लागि पालो पर्खिरहेका भक्तजन। (तस्बीर: रजेन्द्र केसी)
काठमाडौं : महाशिवरात्रीका अवसरमा शिवको दर्शन गर्न बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि लाममा बसेकी वनस्थलीकी लक्ष्मी श्रेष्ठ नौ घन्टापछि मात्र मन्दिरमा पुगिन्।
६३ वर्षीया लक्ष्मी ६७ वर्षीय पति सुरेन्द्रसँग लाममा बसेकी थिइन्। 'आधा घन्टामा दर्शन हुन्छ भनेकाले आएकी थिएँ तर चार घन्टामा आधा बाटो पनि छिचोलिएन’, लक्ष्मीले भनिन्।
कपनबाट आएका तोकबहादुर र तुलसी गुरुङले पनि नौ घन्टा लाम बस्दा मात्रै शिवदर्शन गर्न पाए। एअरपोर्टदेखि लाममा बसेका उनीहरू दिउँसो तीन बजे भष्मेश्वर आश्रमअगाडि पुगेका थिए। ‘आठ घन्टा भइसक्यो लाममा बसेको, खोइ कहिले दर्शन गर्न पाइन्छ?’ थकित देखिएका गुरुङदम्पतीले भने।
पशुपति विकास कोषले भक्तजनलाई आधा घन्टामा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए पनि व्यवस्थापन अस्तव्यस्त थियो। पाँच घन्टाभन्दा कममा थोरै दर्शनार्थी मात्रै मन्दिर पुगे।
बिहान साढे ३ बजेदेखि जयबागेश्वरीबाट लाममा बसेकी रेजिना पाण्डेले मध्याह्न ११ बजेमात्र दर्शन गरेको बताइन्। पश्चिमढोकामा भेटिएकी सातदोबाटोनिवासी उनले भनिन्, ‘झन्डै नौ घन्टा लगाएर पहिलोपटक दर्शन गरियो।’
दर्शन गर्नका लागि बालबालिका र वृद्धवृद्धा पनि आएका थिए। मनमैजुबाट अभिभावकका साथ आएका तीन बालिकाले पनि लाममा बसेरै दर्शन गरे। १० वर्षीया कृपा पाण्डे, रानी गुप्ता र रोशनी गुप्ता पनि बिहान नौ बजेदेखि चाबहिलचोकदेखि लाममा बसेका थिए। उनीहरूले पाँच घन्टा लागेको बताए। मन्दिर पस्ने बेलामा ठेलमठेल भइरहेको थियो।
कोषका सदस्यसचिव गोविन्द टन्डनले मन्दिरको नियमित पूजा तथा राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको दर्शनले लाम बस्नेले दुईतीन घन्टा बढी दु:ख पाउनुपरेको बताए। मध्याह्न २ बजे मन्दिर पुगेका यादवले १० मिनेट र सवा १ बजे पुगेका झाले २० मिनेट दर्शन गरेका थिए।
राष्ट्रपति पशुपति पुगेकै बेला हेलिकोप्टरबाट पशुपति परिसरमा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। दर्शनका लागि संस्कृतिमन्त्री भीम आचार्य र सिँचाइमन्त्री एनपी साउद पनि पुगेका थिए।
टन्डनले करिब सात लाख पशुपति आए पनि तीन लाखले दर्शन गरेको जानकारी दिए। दर्शन व्यवस्था उपसमितिका संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीले बढीमा एक घन्टाभित्र दर्शन गराउने गरी व्यवस्था गरिएको भए पनि भनेजस्तो सहज दर्शन गराउन नसकिएको बताए।
बनकालीस्थित हंसमण्डप र अन्य केही ठाउँमा भजनकीर्तन दिनभरिजसो चलेको थियो। छेवैको खाली जग्गामा भारतको वैष्णोदेवी मन्दिर दर्शनको विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाले नि:शुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरेका थिए।
पशुपति परिसरमा खाना, फलफूल, चिया, पानी, सर्वतको नि:शुल्क व्यवस्था थियो। तिलगंगा आँखा अस्पतालदेखि चाबहिलसम्मको सडकमा कपडा, घरायसी सरसामान, फलफूल, मेहन्दी र खेलौनाको व्यापार पनि चम्किएको थियो।
मिति : २०७० फागुन १५, बिहीबार
Plane Crash Bata jogine Parajuli
नेपाल के लेखिरहेछ ?
'कोमा' मा पुगेको मानिसको दिमागमा के कुरा खेल्दो हो? यो पनि व्यक्तिपिच्छे फरक पर्न सक्ला। तर 'फोसिल' लेखिसकेका कुमार नगरकोटीको दिमागमा भने विभिन्न तरंग उब्जिएका छन्। उनले 'कोमा' मा पुगेको मानिसको दिमागी तरंगलाई विसंगतिमूलक प्रयोगवादी नाटकमार्फत अनेक चरित्र उमारेका छन्। मञ्चन हुन लागेको पछिल्लो आफ्नो कृतिबारे उनी भन्छन्, 'एउटा लेखक कोमामा पुगेपछि उसले अनेक अनौठा चरित्रहरू दिमागमा ल्याउँछ। नेता, माझी आदि।'
कल्पनाशीलताका धनी नगरकोटी आफ्ना कृतिबाट पाठकले के सन्देश पाउँछन् त्यसको पछि लाग्दैनन्। टर्कीका लेखक ओर्हन पमुकको निबन्धात्मक कृति 'अदर कलर्स' पढिरहेका उनी भन्छन्, 'पाठक कसरी के लिने भन्नेमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। उसले जसरी ग्रहण गर्छ त्यो नै लेखक र पाठकबीचको सम्बन्ध हो।'
सबै मानिस कोमामै पुग्नु पर्दैन, जुनसुकै अवस्थामा रहेकाले पनि आफ्ना अनुभूति र भोगाइलाई बाँड्न सक्छन्। शारीरिक रूपमा अशक्त नारी हस्ताक्षर झमक घिमिरे त अझ मोफसलमा छन्। तर उनको कलमको गति 'राजधानी एक्सप्रेस' भन्दा कम छैन। 'जीवन काँडा कि फूल' लेखेर मदन पुरस्कार पाएकी घिमिरेले यतिबेला दैनिक अनुभूति र भोगाइलाई समेटेर 'झमकको डायरी' निकाल्न लागेकी छन्।
प्रकाशनको तयारीमा रहेको शब्दहार क्रिएसन्सका प्रबन्धनिर्देशक रमेश कँडेल भन्छन्, 'एउटा अशक्त मान्छेले जीवन कसरी बाँच्छ र कस्तो अनुभूत गर्छ भन्ने विषयमा कृति केन्द्रित छ। समग्रमा यसले जीवनलाई मार्गदर्शन गर्नेछ।' धनकुटाकी घिमिरेले नयाँ कृतिमा जीवनलाई कसरी रचनात्मक बनाउने भन्ने उपाय पाठकलाई दिएकी छन्। अर्को अर्थमा, अपांगता भएकाले गरेका काम पनि सपांग भएर पनि किन गर्न सक्दैनौं? भन्ने भावना जागृत हुने कँडेलको भनाइ छ।
'हिमाल पारि पुगेपछि' नामको नियात्रा कृतिबाट साहित्याकाशमा आफ्नो छाप छोड्न सफल प्रतीक ढकालले फेरि पनि नियात्राकै कृति तयार पारेका छन्। नवौं कृतिका रूपमा उनले 'आनन्द भूमिको आँगनमा' शीर्षकमा नेपालकै वर्णन गरेका छन्। भन्छन्, 'सुन्दर मुलुकको दुर्गम क्षेत्रका नेपाली छेवैको हाँसिरहेको हिमाल हेरेर आफ्ना दु:खका पोकाहरू मनमै गुम्स्याएर मुस्कुराइरहेका सन्दर्भ समेटेको छु।'
सीमान्त भूमि मानिने कञ्चनपुरका कुनो बीचफाँटा होस् वा महाकाली पारिका गाविस भनिने चाँदनी र दोधार हुन्, तिनका प्रत्येक वडाका कहालीलाग्दा कथा ढकालले समेटेका छन्। स्वामी आनन्द अरुणका कृतिहरू 'अन्तरयात्रा', 'सन्त गाथा' र 'सन्त दर्शन' को अध्ययन गरिरहेका उनी थप्छन्, 'यो कृतिमा हिमालतिर, लेकतिर र छेउकुनातिर गरी तीन खण्ड छन्।'
'सेतो धरती' उपन्यासका सर्जक अमर न्यौपाने यति बेला फरक स्वादको कृतिको तयारीमा छन्। पात्र उही समाजको हो। सेतो धरतीमा बालविधवाका पीडा पोखेर पाठकको मन जितेका उनले अहिले भने एउटा बालपात्र पक्रिएका छन्। उनले यसमा प्रेमप्रसंगभन्दा पनि विद्यार्थी भन्ने हरेक बाल मानसिकताको समग्र र सार्वभौम कथालाई उपन्यासमा उनेका छन्।
सुरेश प्राञ्जलीको जनयुद्धको सेरोफेरोसम्बन्धी उपन्यास 'तुइन' पढिरहेका उनी भन्छन्, 'नेपालको शिक्षा प्रणाली एउटा विद्यार्थीभित्र के छ भनेर निकाल्दैन, खोजी गर्दैन। बरु अरूका दिमागमा भएका कुरालाई थोपर्छ र केही घन्टामा वर्षभरि लादिएका कुराको मूल्यांकन गर्छ। यसकै सेरोफेरोमा नयाँ कृति जन्मँदैछ।'
मोफसलमै रहेर सबैको मन जित्न सफल मनु मञ्जिल पनि न्यौपानेजस्तै कृतिको न्वारान गर्न सकिरहेका छैनन्। कविताले नै चिनिएका 'ल्याम्हपोस्टबाट खसेको जून' का कवि उनी अहिले भने निबन्धतिर लम्केका छन्। तर उनी पाठकलाई निबन्धमा पनि कविताको स्वाद दिने नयाँ उपाय रच्दैछन्। अझ 'बोनस' का रूपमा पाठकले निबन्धमा कथाका तत्त्व पनि समेट्नेछन्। सुनसरी इटहरीका उनी भन्छन्, 'पाठक निबन्धमा कविता र कथासमेत स्पर्श गर्न खोजिरहेछ। म चाहिरहेछु, यी निबन्धमा भाषामा छुट्टै चमक होस्।'
प्राडा लोकराज बरालको 'रोमाञ्चित जीवन' अध्ययनरत उनले भूपि शेरचन, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र गोपालप्रसाद रिमाललाई निबन्धमा उनेका छन्। जनयुद्धका कोमल मानवीय चोटदेखि जीवनका निजी दृष्टिकोण अनि आध्यात्मिकका साथै बाहिरी जगत्मा समेत निबन्धमार्फत उनी घोत्लिएका छन्। थप्छन्, 'म कृति निकाल्ने हतारोमा छैन, लेख्ने र पटकपटक सम्पादन गर्ने हतारो भने धेरै छ।'
'आधा बाटो' पछि 'पाण्डुलिपि', त्यसपछि 'गेस्टापो' निकालेर थोरै समयमा अर्को कृति दिन हतारिएका लेखक भने कृष्ण धरावासी हुन्। कृति लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेका उनले भने यात्रा संस्मरणको कृतिको न्वारान गर्न भ्याइसके, 'कागजको फूल'। आफ्नो काम लेख्नेमात्रै भएको बताउने उनी भन्छन्, 'जर्मन, फ्रान्स, लक्जमवर्ग र ब्रसेल्स आदि देश घुमेपछि गेस्टापो उपन्यास लेखेको थिएँ, तिनै देश घुम्दाको संस्मरण हो कागजको फूल।'
आधा बाटोको पूर्ण रूप पाण्डुलिपि र गेस्टापोकै बाँकी सन्दर्भ कागजको फूल भएकाले पनि उनलाई लेख्न समय नलागेको हो। मनुजस्तै फरक स्वाद दिएका छन् धरावासीले पनि, यात्रा संस्मरणमा उपन्यासको स्वाद। मनीषा गौचनको 'ह्वाइट केन' को स्वाद लिइरहेका उनी थप्छन्, 'आख्यानात्मक स्वादमा स्वदेशको अन्य देशसँग तुलनात्मक अध्ययन कृतिमा हुनेछ। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षका साथै विकास र जातीयताका विषयलाई स्वतस्फूर्त रूपमा तुलना गर्न पुगेको छु।'
कवितामै पकड जमाएका तुलसी दिवसले भने फेरि पनि कविताकै कृति निकाल्ने भएका छन्। बारम्बार कार्यक्रमहरूमा वाचन गरेका बाघचाल, अवतार दर्शनदेखि पछिल्ला सिर्जनाको संयुक्त रूप नयाँ कृतिमा हुनेछ। 'तुलसी दिवसका समग्र कविता' शीर्षक राख्ने सोचमा रहेका उनी भन्छन्, 'समकालीन नेपालको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासको प्रक्रियालाई कविताहरूले प्रतिविम्बित गरेका छन्। मान्छेका सूक्ष्मतम अनुभूति र संवेदनासँग पनि कविता जोडिएका छन्।' दिवसले सामाजिक सुरक्षाको अभाव र असन्तुलनका पक्षहरूलाई बहुल अर्थमा कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्राडा अभि सुवेदी भने एकैपटक धेरै कृतिमा हात हालेर अस्तव्यस्त बनेका छन्। साहित्य सुरु गरेदेखिका सबै सन्दर्भलाई समेटेर संस्मरण लेखिरहेका छन् उनी। सन्त साहित्य जसको विद्रोही स्वाभाव हुन्छ, त्यस्ता फकिरहरूको चरित्र चित्रण गरेर 'नेपाली सुफीहरू' उनको दोस्रो तयारी छ।
नाटकबाट आफूलाई उचाइमा पुर्‍याएका उनको तेस्रो आक्रमण तीनवटा नाटकमा रहेछ। भन्छन्, 'एउटा, नेपाली विदेशीहरू नेपाल आउन थालेदेखि भित्रिएको तरंगबारे छ। अर्को सम्पदा र संस्कृतिसम्बन्धी छ। तेस्रो महाभारतको प्रसंग जोडिएको कथामा आधारित छ।'
मिति : २०७० फागुन १०, शनिबार
लोडसेडिङले बचायो जहाज दुर्घटनाबाट
काठमाडौं : जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत लेखा अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले बढुवा भएपछि पदस्थापनका लागि जुम्ला जान नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट लिएका थिए।
कार्यालयको सबै काम सकेर जुम्ला जाने तयारी गरिरहेका पराजुलीले लोडसेडिङका कारण बुझबुझारथ गर्न नपाएपछि फागुन ४ गतेको हवाई टिकट रद्द गरे।
गत आइतबार मध्याह्न १२ बजे निगमको विमान जुम्लाका लागि उड्दा उनी भने भक्तपुर कार्यालयमा बुझबुझारथ गर्दै थिए। दिउँसो एक बजेतिर सैंबुस्थित घरबाट पत्नी एलिनाले टेलिफोन गरिन्, ‘निगमको (९ एन अल्फा ब्राभो ब्राभो) जहाज हराएछ नि !’
खबर सुनेपछि पराजुलीको होसहवास उड्यो। ‘आफूले टिकट रद्द गरेको जहाज हराएको थाहा पाएपछि मुटु नै काँप्यो’, ४६ वर्षीय पराजुलीले अन्नपूर्णसँग भने।
त्यसपछि उनको मोबाइल फोनमा लगातार घन्टी बज्न थाल्यो, ‘धन्य तपाईं जानुभएनछ’, ‘पुनर्जन्म पाएकोमा बधाई।’ एक घन्टाभन्दा बढी टेलिफोनबाट लगातार आएको यस्तो प्रतिक्रियाले आफूलाई पुनर्जन्म पाएको महसुस गराएको उनले बताए।
‘मैले रद्द गरेको टिकट कसैले नलिएको भए उसको पनि जीवन बाँच्थ्यो भन्ने लाग्यो’, दुई छोराका बाबु पराजुलीले भने, ‘अरूको घरमा पीडाले रुवाबासी छ, हाम्रोमा खुसी।’ उनले टिकट काटेको जहाज अर्घाखाँचीको मसिनालेकमा दुर्घटना हुँदा त्यसमा रहेका सबै १८ जनाको मृत्यु भएको थियो।
पराजुलीले भने, ‘काम सकिन्छ भन्ने सोचेर टिकट काटेको थिएँ तर लोडसेडिङले नसकिने भयो। बुझबुझारथ गर्न आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्न ढिला भयो। त्यसैले फिर्ता गरेको थिएँ।’
कार्यालयमा कम्प्युटरका लागि बिजुलीको ब्याकअप नभएका कारण उनले समयमै काम पूरा गर्न पाएका थिएनन्। झापा अनारमुनी घर भएका पराजुलीका बुबाआमाले पनि टेलिभिजनबाट विमान दुर्घटना भएको खबर थाहा पाएपछि फोन गरे।
‘अब जुम्ला नजानू, जानु पर्दैन’, पत्नी एलिनाले भनेको भन्यै छिन्, ‘ज्यानभन्दा ठूलो जागिर होइन।’ परिवार र आफन्तले भनेपछि आफूलाई पनि ज्यानको माया लाग्दै गएको उनले बताए। तर जागिर खाएपछि आफूले भनेको जस्तो मात्रै कहाँ हुन्छ र?
‘हुनत अरू विक ल्प पनि थिए तर मैले नै जुम्ला रोजेको हुँ’, उनले भने। उनले माघ २० गतेकै लागि टिकट काट्ने खोजे पनि नपाएपछि माघ २६ गतेको टिकट काटेका थिए। त्यतिबेला पनि कामले नभ्याएपछि फागुन ४ गतेका लागि काटेका थिए।
२०५४ सालमा नाम्चेस्थित सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा लेखापाल पदबाट जागिर सुरु गरेका उनी धेरैपटक नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा उडिसकेका छन्। अब उनी फागुन १३ गते तारा एअरको विमानबाट जुम्ला जाने तयारीमा छन्।
मिति : २०७० फागुन ११, आइतबार [4898 पटक पढिएको]
Labels: गोपीकृष्ण ढुंगाना, नेपाल वायुसेवा निगम, राजेन्द्र पराजुली
जोगीसँग फोटो खिचेको हजार रुपैयाँ
काठमाडौं : पशुपतिमा भेटिने जोगीसँग फोटो खिचेको मूल्य कति होला? १०, २०, ५० वा सय रुपैयाँ। तर, शनिबार जोगीसँग फोटो खिच्नेले एक हजार रुपैयाँसम्म तिरेका छन्। पन्ध्र शिवालयमा बसेका जोगीसँग फोटो खिचेबापत दुई जापानी युवतीले स्वेच्छाले एक/एक हजार रुपैयाँ दिएका हुन्।
जोगीसँग फोटो खिचाउँदै जापानी युवती
केही दिनदेखि महाशिवरात्रिका लागि भारतबाट समेत पशुपतिनाथ मन्दिर आएका जोगीसँग फोटो खिच्ने लहर छ। फोटो खिच्नेमा विदेशी धेरै छन्। २२/२५ वर्षका देखिने ती जापानी युवतीले गंगादास नामका बाबाको दुई मिटर लामो कपाल शरीरमा बेरेर पालैपालो फोटो खिचेका थिए।
३२ वर्षदेखि राममन्दिरमा बस्दै आएको बताउने गंगादासले फोटो खिचाउनेहरूले खुसी भएर रुपैयाँ दिएको बताए। ६० वर्षीय उनले १० वर्षको उमेरदेखि कपाल र दाह्री पालेको बताए। उनको दाह्री डेढ मिटर लामो छ।
'कतिले पाँच कतिले १० रुपैयाँ दिन्छन्, कति त फोटो खिचेर भाग्छन्', उनले भने, 'खिचेर देशविदेश लैजान्छन्, कतिले पूजा गर्छु भन्छन् कतिले पोस्टर बनाएर बेच्छु भन्छन्।' कपाल र दाह्रीकै कारण सुटिङका लागि गोसाइँकुण्डसम्म पुगेको उनको भनाइ छ।
आर्यघाटको पूर्वपट्टि अनुहारमा रङरोगन गरेका अर्का बाबासँग पनि फोटो खिच्नेहरू भेटिए। बाराबाट आएका ७२ वर्षीय हरिहर गिरीसँगै सिरहाबाट आएका ६५ वर्षीय विक्रु दास पनि थिए। त्रिशूल बोकेका गिरीले अनुहार मजैले रंगाएका थिए।
नागफेनी बोकेका दासले पनि अनुहारमा रङ दलेका थिए। गिरीले भने, 'अनुहार रंगाउन डेढ घन्टा लाग्छ। आकर्षक भएपछि मान्छे आउँछन्।' गिरी र दासको हाउभाउ देखेर एक जोडी विदेशी छेउमा आए। युवतीले नेपाली ५० रुपैयाँ र १० को अमेरिकी डलर दुवै जोगीलाई दिइन्। अनुमति लिएर उनीहरूले फोटो खिचे।
चीनबाट आएको बताउने लिन र लुसीको त्यो जोडीले त्यसपछि जोगीको बीचमा बसेर पालैपालो फोटो खिचाए। लिनले अंग्रेजी भाषामा भने, 'म फोटोग्राफर हुँ, चिनियाँ ट्राभल म्यागजिनमा काम गर्छु।' पैसा तिरेर फोटो खिचेको देखेपछि अर्का एक जोगी पनि छेवैमा आएर बसे। पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिन आएका गिरी र दासले भने, 'साधुको दर्शन गरेर आशीर्वाद लिए भक्तको पनि जीवन सुखी हुन्छ।'
पशुपति वृद्धाश्रमअगाडि एक जोगी हनुमानको मुखुन्डो लगाएर गदा बोकेर उभिएका थिए। उनीसँग फोटो खिच्ने पनि स्वदेशी र विदेशी दुवै थिए। फोटो खिचेपछि गौशालाकी सुषमा कार्कीले भनिन्, 'साधुसँगको फोटो एउटा मेमोरीका लागि मात्र हो।' ती जोगीले भने, 'फोटो खिचेपछि पैसा माग्नु भएन तर हाम्रो कमाइका लागि यो अवसर पनि हो। यहाँ बस्न पाए पनि खानु त पर्‍यो नि।'
मिति : २०७० फागुन ११, आइतबार
Jogi Milan Baba
Ma Na Pa Phohor
धोबीखोला सफाइ अभियान सुरु
काठमाडौंको मध्यभाग भएर बग्ने धोबीखोला सफाइमा जुटेका अभियन्ता।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको मध्यभागबाट बग्ने धोबीखोला सरसफाइ अभियान सुरु भएको छ।
सय सातासम्म निरन्तर चल्ने अभियानको सुरुआत धोबीखोला (रुद्रमती) ले छोएका क्षेत्रका सभासद्हरू प्रकाशमान सिंह, नरहरि आचार्य, रामहरि फुयाल र गगन थापाले शनिबार गरे।
पहिलो दिन कपन गाविसमा पर्ने पाथीभरा टोल, महानगरपालिकामा पर्ने सुकेधारा र सरस्वतीनगरको संगम स्थानबाट धोबीखोला सफाइ अभियान थालिएको हो।
अभियान कपनदेखि शंखमुलसम्म केन्द्रित हुनेछ। १० किलोमिटर लामो धोबीखोला शंखमुल पुगेपछि बागमतीमा मिसिन्छ। विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा ४० सातादेखि बागमती र २० सातादेखि विष्णुमती सफाइ अभियान चलिरहेको छ।
‘धोबिखोला सफा नगरे अरु दुई नदीको अवस्था पनि त्यस्तै हुने डरले अभियान थालिएको हो’, महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले भने। धोबीखोलाबाट करिब तीन हजार मेट्रिक टन फोहोर उठाउने योजना छ।
धोबीखोलाको मुहान सफा गर्न कपन, महांकाल र चपलीभद्रकाली गाविसले पनि अभियान चलाउनुपर्नेछ। अर्यालका अनुसार फोहोर सफाइपछि तीन गाविसबाट बगेर आउने फोहोर छेक्न बाँसको पातलो टाटी लगाइनेछ।
धोबी खोला महानगरपालिकाको वडा ४, ५, ७, ८, ९, १०, ११, ३२ र ३३ गरी ९ वटा वडा भएर बग्छ। सभासद् थापाले फोहोर सफाइ गरे पनि ढल मिसाउन काम नरोके अभियान सार्थक नहुने बताए।
सिंहले नदी सफा बनाउन स्थानीय बासिन्दा सचेत हुनुपर्ने बताए। फुयालले नदीमा फोहोर फाल्नेलाई दण्ड र सफा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा बसाल्न सुझाउ दिए।
आचार्यले राजधानीका सबै नदी सफा गरेपछि मात्रै काठमाडौंको सुन्दरता फर्काउन सकिने बताए। सफाइ अभियानको संयोजन सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले गर्नेछन्। अभियानमा विभिन्न संघसंस्थाको पनि सहभागिता रहनेछ।
सफाइ अभियन्ताले शनिबार सय मिटर क्षेत्रफलको मुख्य फोहोर निकालेका थिए। सामुदायिक सेवा समिति चाबहिलका अध्यक्ष विमल होडाले २०४६ पछि नगर विकासले घडेरी विकास गर्न थालेपछि खोला प्रदूषित हुन थालेको बताए।
उनले भने, ‘पहिले पौडी खेल्थ्यौं, माछा माथ्र्यौं। यो सुन्दा कथाजस्तो लाग्ला।’
मिति : २०७० फागुन ४, आइतबार
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उपभोक्ताहरूको धारामा सात वर्षदेखि खानेपानी वितरण गर्न सकेको छैन। धारा जडान गरे पनि पानी उपलब्ध नहुँदा उनीहरू इनार र ट्यांकर प्रयोग गर्न बाध्य छन्। एक थोपो पानी नआए पनि उनीहरू महिनैपिच्छे रकम तिर्न भने बाध्य छन्।
भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित भद्रकाली मार्गनिवासी पृथ्वीराज श्रेष्ठको घरमा धारा जोडेदेखि कुनै दिन पर्याप्त पानी आएको छैन। सात वर्षदेखि उनको घरमा भाडामा बस्दै आएका लक्ष्मण खनाल भन्छन्, ‘म यो घरमा डेरा बसेको सात वर्ष भयो। आजसम्म कुनै दिन धाराको पानी खान पाएको थाहा छैन। त्यसअघि फाट्टफुट्ट आउँथ्यो रे।’
उनकी पत्नी गीता पानी नहुँदा पिउन, नुहाउन र कपडा धुन सधैं समस्या पर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘टोलबासी डेलिगेसन जाँदा म पनि गएकी छु। आश्वासनमात्र पाइन्छ, पानी होइन। खानेपानी लिमिटेड कहिले पानीको दबाब नपुगेर भन्छ कहिले मेसिन बिग्रिएर भन्छ त कहिले पाइप फेर्नुपर्छ भन्छ।’
सोही मार्गमा ६ वर्षदेखि बस्दै आएकी उर्मिला तिम्सिना पनि घर किनेर बसेदेखि पानीको मुख कहिल्यै देख्न नपाएको बताउँछिन्।
पानी अभावकै कारण केही वर्षदेखि घरको एक तला भाडामा लगाउन पाएकी छैनन्। पिउन जारको पानी प्रयोग गर्ने उनी थप्छिन्, ‘एक बोरा चामल किन्यो भने महिनाभर पुग्छ तर एक ट्यांकर पानी किन्दा एक साता पनि पुग्दैन। कसरी भाडामा लगाउने?’
भद्रकालीमा श्रेष्ठ र तिम्सिनामात्र होइन, झन्डै ३० घरका बासिन्दा यसरी नै बर्सौंदेखि खानेपानीको अभावमा तड्पिरहेका छन्। सोही मार्गका भूपेन्द्र गिरी बर्सेनि पटकपटक गरी सयौंपटक डेलिगेसन गएको बताउँछन्।
सोल्टी होटेलबाट सेवानिवृत्त उनले भने, ‘भन्नु र नभन्नुमा कुनै फरक छैन। पानी नै नआउने भए हामी भन्न जाने समय नाश पार्ने थिएनौं। पानी खोल्नेले केही फन्का घुमाइदिए आउँछ।’ उनी थप्छन्, ‘पानी आएन, पाइप निकालिदिनु भन्दा हुन्छ भन्छन्। न पाइप निकाल्छन्, न त पानी नै दिन्छन्।’
गठ्ठाघरकै सरस्वतीनगर मार्गका बद्री कार्की केही घर पर पानी आउँदा भाँडा बोकेर दौडने गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘हामी एक दर्जन घरका बासिन्दा यसरी नै दौडन बाध्य छौं। झुक्किएर डेढदुई महिनामा अलिकति आउँछ। बाँकी दिनमा कुनै छिमेकीकोमा आए पानीका लागि प्रयास गर्नुपर्छ।’
छिमेकमा पानी आउँदा मोटर लगाएपछि आफूकहाँ पानी नआउने उनी बताउँछन्।
ललितपुर नखिपोटकी रमाइलो टोलनिवासी करुणा राई पनि सरकारले वितरण गर्ने खानेपानीका कारण दिक्क छिन्। बेलाबेलामा आउने पानीले मात्र उनलाई दु:खी बनाएको होइन, पानी आएको समय पनि लोडसेडिङ भइदिँदा दिक्क भएकी छन्।
उनी भन्छिन्, ‘पानीकै कारण घर हुने छिमेकी तनाउमा छन्। अझ पानीकै कारण घर भाडामा लगाउन नपाउनेहरूको पीडा त के भन्नु?’ पानीको भरपर्दो स्रोत नहुँदा अधिकांश नखिपोटवासी जार र ट्यांकरको पानी किन्न बाध्य छन्।
करुणा भन्छिन्, ‘लुगा धुन र नुहाउन इनारको पानी प्रयोग गर्छौं। त्यो पनि केही महिनामात्र आउँछ अनि ट्यांकर नगुहारे कामै ठप्प हुन्छ।’
काठमाडौं कोटेश्वरनिवासी मीना खड्काले धारामा पानी आउने समस्या र आएको पानी पनि तैरिँदा लेउ लाग्ने र कीटाणुसमेत आउने भएपछि धारा नै जोडेकी छैनन्।
एक वर्षअघि घर बनाएकी मीना भन्छिन्, ‘काठमाडौं राजधानी भनेर के गर्नु? छरछिमेक, आफन्त र चिनेजानेका धेरैका मुखबाट खानेपानीका थुप्रै कथा सुनेकी थिएँ। आफूले घर बनाएपछि त्यो समस्या बेहोर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो, त्यस्तै भएको छ।’
उनी धारा जोड्नुभन्दा इनार खनेर र जार किनेर पानीको समस्याबाट केही राहत पाएको बताउँछिन्।
भक्तपुरस्थित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ठिमीका सहायकनिरीक्षक प्रेमराज त्रिपाठी पहिले बस्ती पातलो हुँदा पानी पर्याप्त हुने गरेको तर बर्सौं बित्दा पनि पानीको पाइप एउटै भएकाले समस्या थपिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘घर थपिएको थपियै छन्। त्यही चार वा दुई इन्चको पाइपबाट पानी बाँड्दै लैजानुपर्छ अनि कसरी पुग्छ?’ उनी पानी खोल्ने ठाउँबाट मोटरले पानी तान्दै जाँदा केही परका घरमा नपुग्ने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ठूला पाइप नफेरेसम्म बर्सौं पानी नआउने घरहरूमा पानी आउन त सम्भव नै छैन।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बर्सौंसम्म पानी नआउँदा पनि उपभोक्ताले सहेर बसेका कारण यस्तो भएको बताउँछन्। अन्य देशका सहरबासी भए विद्रोह गरिसक्ने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘पानी वितरण गर्ने सबै निकायको चरम लापरबाहीले पनि राजधानीवासी काकाकुल बनेका छन्। विद्रोह नगरी अधिकार पाइँदैन भन्ने चेतना सबैमा आए सरकार माग पूरा गर्न बाध्य हुनेछ।’
लिमिटेडका प्रवक्ता मिलन शाक्य पानी आउँदै नआएका बस्तीमा आलोपालो मिलाएर वितरण गर्न सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आइरनका कारण बन्द हुन लागेका पाइप वास गरिरहेका छौं।’
लाखौं लिटर पानी डम्पिङ छ
मदनकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वप्रमुख, मध्यपुरठिमी नगरपालिका
बोडे खानेपानी आयोजनाबाट उत्पादित पानी मिनरल वाटरभन्दा कम गुणस्तर छैन भनेर प्रमाणित भएको छ।
विश्व ब्यांकको सहयोगमा मनोहरा नदीकिनार र नीलबाराही जंगलको बीचमा डग वेल निर्माण गरेर ४८ लाख लिटर पानी उत्पादन गरेपछि यसअघिका चारवटा इनार (वेल) बाट उत्पादन हुने ६ लाख आइरनयुक्त पानी पनि क्रमश: सफा भयो। त्यसपछि २०५८ सालमा जाइका परियोजनाले प्रतिदिन दुई करोड लिटर पानी उत्पादन गर्‍यो।
काठमाडौंका मीनभवन र अनामनगरमा ट्यांकी बनाएर वितरण सुरु गरियो। अहिले ठिमी नगरका बासिन्दालाई १० लाख र भक्तपुरवासीलाई १० लाख लिटर पानीमात्र वितरण गरिएको छ।
ट्यांकी सानो भएर सीमित पानी वितरण भएको हो। साथै सुरुमा ६ लाख लिटर पानीसँगै उच्च आइरन उत्पादन हुँदा धेरै पाइप आधाभन्दा बढी ब्लक छन्। आठ इन्च पाइप चार र चारका दुई इन्चमा सीमित भएका छन्। घर भने थपिइरहेका छन्।
पाइपकै कारण भक्तपुरका दुई सहरमा पानी वितरण हुन नसकेको हो। काठमाडौंमा एक करोड २० लाख र भक्तपुरमा २० लाख लिटर पानी वितरण गरेपछि उत्पादन हुने करिब ६० लाख लिटर पानी दैनिक खेर गइरहेको छ। त्यसलाई मात्रै वितरण गर्न सके भक्तपुरवासी पानीको समस्याबाट मुक्त हुनेछन्।
२०१६ सालमा बिछ्याइएको पाइप फेर्न एसियाली विकास ब्यांकमार्फत काम गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले एक महिनाभित्र ठेक्का दिने र एकदेखि डेढ वर्षभित्र पाइप फेर्ने कामको थालनी हुँदैछ।
मिति : २०७० फागुन ३, शनिबार
पानीका लागि मध्यरातको सास्ती
पानीका मुहान नै प्रदूषित
मेलम्ची आउन अझै दुई वर्ष
अर्बौंको पानी व्यापार
Pasal Pasal ma Dustbin
महानगरबासी सेवा लिनै आउँदैनन्
लक्ष्मण अर्याल, कार्यकारी अधिकृत, कामनपा
महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएका लक्ष्मण अर्याल महानगरमा विकास व्यवस्थापन र सुशासनमा नयाँपन दिने प्रयासमा छन्। सरकारले आफ्नो इच्छाविपरीत जबर्जस्ती कार्यकारी प्रमुख बनाएको बताउने अर्यालसँग महानगरको सौन्दर्य, सुविधा, बेथिति र आवश्यकताबारे अन्नपूर्णले गरेको कुराकानी :
हाम्रो नगर महानगरजस्तो छ त?
मुलुकको एकमात्र महानगर साँच्चिकै महानगर हुनका लागि समग्र संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका लागि महानगरीय कानुनको आवश्यकता छ। नगरवासीको अपेक्षा सम्बोधन गर्न महानगरीय करप्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।
केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच गरिने राजस्व बाँडफाँटका आधार र करका क्षेत्रलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। महानगरको प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्छ। यी आवश्यकता र विकासको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही महानगरीय प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ।
समस्या केके छन्?
काम गर्दा एकीकृत विकासको ढाँचा र समन्वयात्मक अवस्था छैन। अन्तरनिकाय वित्तीय हस्तान्तरण कमजोर छ। क्षमताअनुसार आय संकलन हुनसकेको छैन। सेवा प्रवाह सेवाग्राही मैत्री बनाउन र लागत घटाउन सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा छैन।
तपाईंका अजेन्डा के छन्?
महानगरपालिकामा आएको नौ महिना भयो। पदबहालीपछि विकास र सुशासन कसरी अघि बढाउने भनेर लागें। विकास व्यवस्थापन अति जटिल विषय भएकाले जनशक्ति संरचना पनि तहअनुकूल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। स्थानीय निकाय जनताको घरआँगनको पहिलो सरकार भएकाले सुशासनले नै योगदान दिन्छ भन्ने सोचाइ हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले हाल ७३ वटा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैलाई पहिलो ध्येय बनाएको छु।
यसलाई कसरी सम्भव बनाउनुहुन्छ?
विकास व्यवस्थापन र सुशासनका लागि पाँच वर्षभित्र विद्युतीय संयन्त्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने अठोट गरेको छु। काम भइरहेको छ। जन्मदर्ता, राजस्व, नक्सा इजाजतलगायत काम विद्युतीय माध्यमबाट भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षभित्र यी सेवा सबै ३५ वटै वडामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। पाँच वर्षभित्र महानगरपालिकालाई कागतरहित बनाउने योजना छ। एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास भई महानगरवासीले घरबाटै सेवा पाउनेछन्।
महानगरवासीले असहयोग गरेका हुन्?
समग्र विकासका लागि महानगरवासीको योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहभागिता कमजोर छ। महानगरपालिकाले गरिदेओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। ऐननियम पालना गर्ने, कर तिर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, सेवा लिन आउँदा सुझाउ दिने, वडाहरूले गर्ने जनसहभागितामा घचघच्याउनुपर्ने जस्ता थुप्रै काम गरेको पाइँदैन। बरु राजनीतिक दलका नेतालाई गुनासो पोख्न पुग्छन्। यसैले होला महानगरमा गुनासा नै कम आउँछन्। अझ तोकिएका सेवा सुविधा समयमा लिनसमेत आउँदैनन्।
भौतिक विकासमा महानगर के गर्दैछ?
महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा २७ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। सात किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छिटो ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद सम्झौता भइसकेको छ।
तीनपिप्लेदेखि ओखरपौवासम्मको आठ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्दैछौं। यो काम असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनेछ। महानगरपालिकाको आन्तरिक साधनस्रोतबाट पनि थप केही सडक निर्माण र मर्मतसम्भार अघि बढाइएको छ। यसका लागि लाग्ने ६३ करोडमध्ये ७५ प्रतिशतको खरिद सम्झौता भई काम सुरु भएको छ। नियमित सडक मर्मतलाई पहिलोपटक मर्मत कोष बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौं।
गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम छन्?
यस्तो अवस्था पनि धेरै छ। काठमाडौं राजधानी पनि हो। एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नका लागि स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने, 'क्लिन' सहर र 'ग्रिन' सहरको विकास गर्ने काम हुन सकेको छैन।
यसैगरी बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमतीजस्ता ऐतिहासिक नदीलाई सफा र हराभरा बनाउने अभियान साकार पार्न सकिएको छैन। नदी सरसफाइ अभियानमा जनसहभागिता जुटाउन सकिएको छैन। भौतिक तथा सहरी विकासका पूर्वाधार महानगरवासीको चाहनाअनुरूप निर्माण गर्ने काम हुनसकेको छैन।
यतिले मात्रै महानगर हुन्छ त?
मेरो मुख्य ध्येय त आयोजनाहरूको ब्यांक बनाउने छ। स्रोत र साधनको अनुमान गरी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको क्षेत्रमा सहरी स्वास्थ्यलाई स्तरोन्नति गर्ने, भरपर्दो बनाउने र पहुँच वृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्छ। रोजगारी वृद्धि हुने सीप विकास गर्ने काम गर्न बाँकी छ। भौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि चाहिने जति लगानी गर्न सकिएको छैन। यसको सूची लामै बन्छ।
महानगर राम्रो बनाउन अहिलेसम्म के गर्नुभयो?
सहरलाई कुरूप बनाउने नौ सयभन्दा बढी होर्डिङ बोर्ड हटाइएका छन्। पार्किङ व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएको छ। सुशासन दिने क्रममा सबै वडा कार्यालयमा प्रशासकीय कार्यविधि लागू गरेका छौं। विभिन्न विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापनमार्फत राजस्वमा व्यापक वृद्धि गर्दैछौं।
सहरी यातायात त अस्तव्यस्त छ नि?
हो, सहरी यातायात व्यवस्थापन नगरी महानगरको विकासको गति अघि बढ्नै सक्दैन। रात्री र सिटी बसको सेवा दिन सकिएको छैन। राज्यका निकायसँग सहकार्य गरी सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सार्वजनिक यातायातका लागि ठूला बसबाट सेवा दिने, छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने, सम्भाव्यता क्षेत्रको अध्ययन गर्नेजस्ता काम भइरहेका छन्।
सडकबत्तीमा सोलार जडान गरी उज्यालो पार्ने काम भइरहेको छ। सोलारजडित बस स्ट्यान्ड निर्माण गर्दैछौं। वायु प्रदूषण केन्द्र स्थापना गर्न लागेका छौं। 'कोर सिटीÓ को आठ किलोमिटर पैदल हिँड्ने मार्गका रूपमा सुधार गर्ने काम भइरहेको छ।
नारा 'क्लिन सिटी, ग्रिन सिटी' छ तर पार्क सधैं उजाड छन् नि?
रत्नपार्क, बालाजु पार्क र शंख पार्कलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षका लागि ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तय गरेका छौं। यसपटक पार्क व्यवस्थापन र नदीकिनार हरियाली बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अघि सारेका छौं। तीनकुनेमा पार्क बनाउन कार्ययोजना तयार छ, तत्काल तारबार गर्न सम्झौता भइसकेको छ। सडकको बीचमा आइल्यान्ड र ग्रिनबेल्ट निर्माण गर्नेछौं।
काम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप कति छ?
यसअघिको अवस्था थाहा भएन। तर म आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप छैन। सही योजना बनाउन सके राजनीतिक सोचाइ पनि समग्र विकास र समृद्धिकै सोचाइमा जोडिने भएकाले हस्तक्षेप हुनुपर्ने पनि देख्दिनँ। तर बिनातयारी, योजना र लगानीबिना काम थालिए सामाजिक हस्तक्षेप हुनसक्छ। यो खतरा सधैं देखिएको छ।
यी सबै काम कहिले र कसरी गर्ने त?
सबै काम सम्भव हुन्छ तर जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा भने असम्भवजस्तै छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकायमा स्थायी सरकार चाहिन्छ। यसका लागि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि र साथ दिने कर्मचारीको संयुक्त प्रयासमा महानगरलाई महानगर बनाउन सकिन्छ।
मिति : २०७० माघ २९, बुधबार
Labels: गोपीकृष्ण ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल
अमूल्य कलाको बजार
सिद्धिमुनि शाक्यले दस वर्षअघि बसुन्धरा, मञ्जुश्री र चिन्तामणि लोकेश्वरका तीन चित्र २२ लाख रुपैयाँका
दरले बेचेका थिए। काठमाडौं स्वयम्भूनिवासी कलाकार उदयचरणका अनुसार यी तीनवटै चित्र बेलायतका रोबर्ट बियरले किनेका थिए। शाक्यको भने निधन भइसकेको छ।
उदयचरणले पनि आठ वर्ष लगाएर एउटा चित्र बनाएका थिए, अष्टमातृकाको तैलचित्र। जापानको फुकुओकास्थित सरकारको एसियन आर्ट म्युजियमले फाइन आर्ट नामक आर्ट डिलरमार्फत श्रेष्ठको उक्त चित्र दस वर्षअघि नौ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। उनी भन्छन्, 'फाइन आर्टका केनिची सातो नेपाल आएर लगेका थिए। त्यसपछि मेरा महालक्ष्मी र धुमावतीका चित्र क्रमश: पाँच हजार र दुई हजार डलरमा बिक्री भएका छन्।'
भारतमा काम गर्दा किरण मानन्धरले एउटा चित्र करिब १३ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए। नेपालमा भने उनको राधाकृष्णको चित्र सुरुमा पाँच हजार रुपैयाँमा पनि बिक्री भएन। भन्छन्, 'सन् १९८१ मा बनाएको उक्त चित्रले पछि १० लाख रुपैयाँ कमाएको थियो।'
सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीकी निर्देशक संगीता थापाका अनुसार भारतीय नेपाली लक्ष्मण श्रेष्ठले भारतमा एउटा चित्रको ५० लाख रुपैयाँ लिएका थिए। उनी भन्छिन्, 'नेपालमा पनि पौवा र थांका चित्र महँगो मूल्यमा बिक्री भएका छन्, बिदेसिएका छन्। जुन ६० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएका छन्।'
दुर्गा बराल (वात्सायन)ले ६० को दशकमा पोखरामा धेरै चित्र बिक्री गरेका थिए। पोखरा घुम्न आएका पर्यटकलाई चित्र बेचेर उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेका थिए। उनी भन्छन्, 'द्वन्द्वकालमा एकल प्रदर्शनी गर्दा मान्छेको पीडा दर्शाउने भावको चित्रलाई ९० हजार रुपैयाँ मूल्य राखेको थिएँ। इन्सेकले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर किन्यो। त्यो नै मेरो महँगोमा बिक्री भएको चित्र हो।' उनका अनुसार काठमाडौंनिवासी शशिकला तिवारी जापानको फुकुओकामा ६ लाख रुपैयाँका दरले चित्र बिक्री गर्छिन्।
नेपाली कलाकार पनि चित्र बेचेरै जीविकोपार्जनमात्र होइन, आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। विदेशी कलाकारको तुलनामा पुग्न नसके पनि नेपाली कलाकार उनीहरूलाई पछ्याउने क्रममा छन्। व्यक्तिगत सम्पर्कमा विदेशमा वा विदेशीलाई फाट्टफुट्ट बिक्री गर्नु बेग्लै हो। विभिन्न देशले आयोजना गर्ने कला प्रदर्शनीको छनोटमा पर्नु पनि ठूलो खुसी ठान्छन् नेपाली कलाकर्मी।
भन्छन्, 'कतिपय प्रदर्शनीमा कला बिक्री गरिन्नन्। कतिपयमा उनीहरूकै समूहले दर तोक्छन्।' दुई वर्षअघि उदयचरणको संयोजकत्वमा जापानको एसियन फाइन आर्टमा नेपाली पौवा चित्र प्रदर्शनी भयो। उदयचरणका अनुसार तीन महिनासम्म चलेको उक्त प्रदर्शनीमा कुनै चित्र बेचिएन।
अमूर्त नै बढी बिक्छन्
प्रतिष्ठानका कुलपति किरणले बेच्ने चित्रहरू प्राय: अमूर्त नै हुन्। फ्रान्सको इन्टरनेसनल सिटी अफ आर्टमा १९ वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएपछि नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा चार वर्षदेखि कुलपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका उनी भन्छन्, 'विदेशीहरू अमूर्त चित्र बढी किन्छन्। नेपालमा पनि चित्र किन्ने भनेका कूटनीतिज्ञ, पर्यटक र नेपाली उद्योगी नै रहेकाले अमूर्त नै बढी बिक्री भएका छन्।
नेपाली पनि विदेशबाट फर्किएपछि किन्ने हुन्।' उनका अनुसार अधिकांश नेपाली भने मूर्त चित्र नै बढी मन पराउँछन्। व्यावसायिक कलाकार आफ्ना चित्र बिक्री नगरी जीवन निर्वाह गर्नै सक्दैनन्। बिक्री हुँदा पनि उनीहरू आधा खुसी आधा दु:खी हुन्छन्। मानन्धर भन्छन्, 'किन्नेहरूलाई भन्छु, मेरा नानीहरूलाई राम्ररी सम्हालेर राखिदिनोस् है।' कतै भ्रमणमा जाँदा भित्तामा आफ्नो चित्र देखे उनलाई आफ्नो नानीझैं लाग्छ।
अमेरिकी चित्रकार जेम्स ह्विस्लरले भनेका छन्, 'एउटा कलाकारको कृति किन्नु भनेको उसको मेहनतलाई होइन, उसको दृष्टिकोणलाई पैसा तिर्नु हो।' पेरिसको साँजरमा मूर्त कलाकृतिमात्र पाइन्छन्। पेरिसकै सेन नदी क्षेत्रमा आधुनिक अमूर्त कलामूर्ति पाइन्छन्। फ्रान्समा क्रान्ति लुई दोस्रोको टाउको काटेको ठाउँमा क्रान्तिहरू प्रतिविम्बित गर्ने चित्रहरूमात्र पाइन्छन्।
विश्वका अन्य देशमा भएको कलाको चित्रण गर्ने कलाकर्मी मानन्धर भन्छन्, 'नेपालमा भएका कला पनि देखाउने ठाउँ नै भएन।' काम गर्ने वातावरण र ठाउँ भए नेपाली कलाकारले श्रम बेचेर पर्याप्त काम, दाम र नाम पाउनसक्ने उनको बुझाइ छ। कलाको स्वादले तानेपछि घर छोडेर भारत पसेका उनी पछिल्ला १९ वर्ष फ्रान्समा थिए। भन्छन्, 'कलाकै कारण १९ वर्षसम्म म फ्रान्समा रमाउन सकेँ। म त्यहाँ बाँचेकै पेन्टिङले हो। नेपालमा पनि मलाई यसैले बचाउँछ।'
हुन सकेन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी
कलाकार बाँच्नेमात्र होइन, कलाकै माध्यमबाट धनी हुन सक्छ। कलाको कारोबार हुनुले कलाकारमात्रै होइन, देश नै धनी हुनसक्छ भन्ने प्रमाण पेरिस, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशलाई बुझे पुग्छ। कतिपयले अनुमान गर्न सक्दैन, एउटा कलाको मूल्य कति होला? हामी नेपाली एउटा सरदर घर किन्न ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ खर्चिन्छौं।
तर, विदेशी दर्जनौं भव्य घर किन्ने रकम अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँसम्म एउटा चित्रका लागि खर्चिन तयार छन्। हालसम्म ज्यूँदा अमेरिकी कलाकार जेफ कुन्सले सुन्तले रङको 'द बेलुन डग' चित्रलाई ५८.४ मिलियन डलरमा बिक्री गरेको तथ्यांकले कलाको महत्त्व पुष्टि गर्छ। नेपाली मूल्य करिब ६ अर्ब अर्थात् पाँच अर्ब ८० करोड रुपैयाँको यो चित्र सन् १९९४ देखि २००० सम्म कोरेको शृंखलाबद्ध चित्रमध्ये एक हो।
प्रतिष्ठानको भवनपरिसरमा २० रोपनी जग्गा छ। त्यो खाली ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक सहयोग गर्ने र संस्कृति मन्त्रालयले वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्ने हो भने नेपाल आउने धेरै पर्यटक ठमेल नै पुग्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिने प्रतिष्ठानका कुलपति किरण मानन्धरको भनाइ छ। भन्छन्, 'नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्न भवनसमेत छैन।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ग्यालरीसमेत छैन। प्रतिष्ठान परिसरको खाली जग्गामा यस्तो भवन निर्माण गर्नसके क्षमतावान् नेपाली युवा कलाकार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पुग्थे।' कलाका बारेमा किरणको एउटा भनाइ छ, 'आधुनिक कलाकारले हिजोको इतिहास हेरेर त्यसैलाई नदोहोर्‍याई नयाँपनको खोजी गर्नुपर्छ, अनिमात्र पहिचान सशक्त हुनसक्छ।'
बजार नभएरै मूल्य भएन
सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी, बबरमहलकी निर्देशक संगीता थापा कला क्षेत्रको अवस्था पहिलेभन्दा धेरै माथि रहेको बताउँछिन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ग्यालरी नभए पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि दर्जनभन्दा बढी ग्यालरी खुलेकाले प्रदर्शनीका लागि उपयुक्त अवसर रहेको उनको भनाइ छ। भन्छिन्, 'तर पनि नेपाल युरोप र अमेरिकाको होइन, कम्तीमा बंगलादेश, भारत र श्रीलंकाजस्तो पनि हुन सकिरहेको छैन।
अर्थात्, 'मार्केट कन्फिडेन्स' छैन। किनेर के पाउने? भन्ने सोच छ। बजार तरलता छैन।' भिज्युअल आर्टिस्ट उनी कलाको बजार राजधानीबाहिर नभएकोप्रति दु:खित छन्। तर, पोखरामा एक साताअघि अशोक पालिखेले खोलेको कलासम्बन्धी संग्रहालयबाट भने उनी खुसी छन्। साहित्य, नाट्य र संगीत क्षेत्रजस्तो कला क्षेत्रले माया पाउन नसकेकोमा भने उनी दु:खी छन्।
सरकारको आर्थिक एवं अन्य सहयोग नभएकै कारण कला क्षेत्र पछि परेको कलाकारहरूको गुनासो छ। थापा भन्छिन्, 'ग्लोबल वार्मिङ' को कुरा चलेका बेला २२ जना नेपाली कलाकारले चित्र बनाएका थिए। कुनै चित्र कमजोर थिएनन्। एकातिर तिनको क्षमता प्रस्तुत भएको थियो भने अर्कातिर आमजनतालाई राम्रो सन्देश दिइरहेका थिए।'
तर, प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले कार्ड वितरण गरिसकेपछि कला सम्मेलन उद्घाटन गर्न नआउने भनेको सन्दर्भले कलाकर्मी दु:खित बन्नु परेको उनको भनाइ छ। थप्छिन्, 'सरकारले त सहयोग गर्नुपर्ने हो तर हामीले गरेका काममा पनि चासो र महत्त्व छैन। कसरी नेपाली चित्र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ?'
नेपालीको नाममा विदेशमा संग्रहालय
सुबोध घिमिरे चित्रमा सानैदेखि आकर्षित भए। मूर्तबाट कलायात्रा सुरु गरेका उनी केही वर्षयता अमूर्त चित्र नै बढी मन पराउँछन् र बनाउँछन् पनि। ठमेलनिवासी उनी भन्छन्, 'यो मेरो 'पार्ट टाइम हब्बी' हो। भ्याउँदा बनाउने भएकाले मैले पछिल्ला केही वर्षमा झन्डै दुई दर्जन अमूर्त चित्र बनाएको छु।' पेसाले प्रहरीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (एसएसपी) उनी गहिरो साधना गरेपछिमात्र चित्र कोर्नुपर्ने बताउँछन्।
भन्छन्, 'पीडितहरूले न्याय पाएपछि जुन खुसी देखाउँछन्, त्यसलाई चित्रमा उतार्दा आनन्द लाग्छ।' पेसाकै माध्यमबाट उनी २६ देश पुगिसके। जहाँ पुगे पनि उनको प्राथमिकता भने आर्ट ग्यालरी भ्रमण नै हुन्छ। घुमे पनि उनले विदेशबाट चित्र किनेका छैनन्। तर, ती चित्रको प्रिन्ट कपीहरू भने खरिद गरेका छन्।
अमूर्त चित्रमा साधना गरेर खुला र पृथक् आयाम दिने किरण मानन्धरलाई रोल मोडल मान्ने उनी थप्छन्, 'मैले किन्नु परेको छैन, अरूले नै खरिद गरेर दिन्छन्। बरु मैले आफ्नो चित्र पनि बेचेको छैन। मन पराएर लैजानेहरूको सन्तुष्टि पूरा गरिरहेको छु।'
कलाकार लैनसिंह बाङ्देलको भनाइले नेपाली कला क्षेत्रको समग्र स्थिति बोध गराउँछ, 'नेपाली कलाकारहरूमा धैर्य, लगन, परिश्रम छैन। उनीहरू रातारात प्रसिद्धि कमाउन चाहन्छन्। कलाका लागि कत्रो आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन।
माइकल एन्जेलो, पिकासोजस्ता मूर्धन्य कलाकारहरूको जीवनीभित्र घोत्लिएर हेरून् त, उनीहरूको जीवनीभित्र कत्रो लगन, धैर्य र परिश्रम पाइन्छ।' चित्रमा धैर्य अपनाएर गहन ढंगले काम गर्ने किरण मानन्धर अहिले आफूले बनाएको सानो चित्र पनि ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने बताउँछन्।
भन्छन्, 'ताइवानमा मेरै नाममा संग्रहालय छ। डेनमार्कमा मेरो पेन्टिङ लिँदालिँदा संग्रहालय नै बनाइएको रहेछ।' डा. एएस डेभिडले अमेरिकाको लस एन्जलसमा आफ्नो अपार्टमेन्टमा ग्यालरी बनाएको उनको भनाइ छ। थप्छन्, 'नेपाली कलाकारका चित्र विश्वका विभिन्न देशमा प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। सम्मेलनहरूमा पनि भाग लिएकै छन् तर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलनको काम हुन नसक्दा मन खुसी छैन।'
डेढ लाखसम्म लिएको छु
- रविनकुमार कोइराला, प्रमुख, वास्तुकला एवं अन्य सिर्जनात्मक कला विभाग, नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान
सानैदेखि सिर्जनात्मक किसिमको मान्छे भएकाले भित्ता र भुइँमा पनि कोरिहाल्थेँ। १०/११ वर्षको भए पनि अजंगको घोडा दौडाउनसक्ने हिम्मत थियो। अनौठा कलात्मक र सन्देशमूलक विधाका लागि हिम्मतको ठूलो जरुरी हुँदो रहेछ। आफ्ना मनका कुरा मिलाएर अभिव्यक्त गर्नका लागि हिम्मत भएरमात्र नपुग्दो रहेछ। कला क्षेत्रको चुनाव पनि गर्नुपर्ने भएकाले चित्रकलामै होमिएँ।
सुरुआतमा दर्जनौं मुहारचित्र बनाएँ। नेपालमा नामुद धनाढ्यहरूका घरमा छन् ती मेरा चित्र। दुई दशकअघि नै मैले एउटा ठूलो आकारको कलाको ५० हजार रुपैयाँ लिएको थिएँ। आफ्नै शैली विकास गरेपछि मानवमात्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मान्यतामा काम गरिएका चित्रहरूमध्येको एउटा चित्र डेढ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको छु। तर, पछिल्ला दिनमा म इन्स्टलेसन, सर्ट भिडियो आर्ट आदि सन्देशमूलक अवधारणामा कामहरू गरिरहेको छु।
साथै बेलामौकामा नेपाली कलाको शक्ति छिमेकी एसियाली देशमा पुगेको पाएको छु। यसलाई विश्वव्यापीकरण नगरेसम्म नेपाली कलाको मूल्यमा वृद्धि हुन्न। सरकारले पनि कलाकारको शक्ति पहिचान गरी तिनका सिर्जनाको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। केही विश्वविद्यालय र कला संस्थाहरूले नेपाली कलाका बारेमा बुझ्न चाहेका छन्।
भानुभक्तको चित्र बनाएर कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मैले २० वर्षअघि नै हुलासचन्द गोल्छाको पोट्रेट बनाएको थिएँ। चित्र बनाउन दिइरहने उहाँले एक दिन भन्नुभयो, 'तिमीमा ठूलो प्रतिभा छ तर आर्थिक सहयोगको आशमा मात्र नबाँच, यश कमाउनेतिर लाग। मबाट हुने सबै खालका सहयोग गर्न तयार छु।' मजस्तो नवप्रतिभालाई त्यति बेला त्योभन्दा ठूलो कमाइ के होला र? त्यस वाक्यले अझै धेरै आर्जन गरिरहेको महसुस भएको छ।
एक लाख पाएकी छु
- सुनिता राणा, भिज्युअल आर्टिस्ट, काठमाडौं
रुचि सानैदेखि भए पनि चित्रमा औपचारिक काम गर्न थालेको २५ वर्ष भएछ। मानिस निरन्तर कुनै न कुनै सोचमा हुन्छ। सोचाइसँगै विविध तस्बिरहरू पनि चलचित्र हेरेझैं देखिइरहन्छ। त्यही विषयलाई लिएर आर्ट गर्ने सोच आयो।
एकपछि अर्को सोच र तस्बिर आउने विषय सुनाएपछि कलाकार एवं पति सुदर्शनविक्रम राणाले राम्रो कला हुन्छ भने। 'निरन्तरता' शीर्षकमा केही चित्र बनाएँ। नौ बाई चार फिटको एउटा चित्र एक लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो।
सगरमाथाको फोहोरबाट जुन्को तावेई र तेन्जिङ नोर्गेको पोट्रेट बनाएको थिएँ। 'उत्सव' शीर्षकको प्रदर्शनीमा ती चित्रले महत्त्व पाएका थिए। एक हजारभन्दा बढी चित्र बनाइसकेँ। उपत्यकामा पाँचवटा एकल प्रदर्शनी गरेकी छु। नेपालमा पनि कला बुझ्नेको संख्या बढेको छ। पारखी पनि बढेका छन्। हामी दुई मिलेर 'द आर्ट क्लब' खोलेका छौं।
मनाङको नारमा ढुंगाको उद्यान र त्यसमा ढुंगाकै मूर्तिहरू राख्ने योजनाअनुरूप काम भएको छ। यसले दुर्गममा पनि नेपाली कलाको विस्तार हुने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यहाँ खरिद नभए पनि भिन्दै छाप बनाउने हाम्रो ठहर हो।
मैले पोट्रेट र इन्स्टलेसन आर्टहरू गरेकी छु। हालसम्म दर्जनौं पोट्रेट बनाएकी छु। एउटाको मूल्य बढीमा २० हजारसम्म पाएकी छु। कलाका विभिन्न क्षेत्र छन्। तर, राम्रो गर्नसके बजार क्रमश: बढ्ने देखेकी छु। हाम्रो हकमा राम्रो चित्र बनाउने आधार छन्। आफ्नो शतप्रतिशत सोच, अध्ययन र मननमा पति वा पत्नीले एकआपसमा त्यति नै सोच थप्ने काम हुन्छ। यसले निखार आउनेमा हामी विश्वस्त छौं।
विश्वका दस महँगा चित्र
१. पल्र्स सेजाँको 'द कार्ड प्लेयर' दुई सय ५९ मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १८९२ मा एक वर्ष लगाएर बनाइएको यो चित्र जर्ज एम्बिरओसले सन् २०११ मा इस्टेट अफ कतारलाई बेचेका थिए।
२. ज्याक्सन पोल्लोकको 'नं ५ १९४८' एक सय ४० मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १९४८ मा बनाइएको उक्त चित्र डेभिड जेफेनले सन् २००० मा डेभिट मार्टिन टुलाई बेचेका थिए।
३. विलियम डे कुनिङको 'वुमन ३' एक सय ५७.५ मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १९५३ मा बनाइएको उक्त चित्र डेभिड जेफेनले सन् २००६ मा स्टेवेन ए. कोहेनलाई बेचेका थिए।
४. पिकासोको 'ले रेभ' एक सय ५५ मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १९३२ मा बनाइएको उक्त चित्र स्टेभे वान्ले सन् २०१३ मा स्टेवेन ए. कोहेनलाई बेचेका थिए।
५. गुस्तभ क्लिमिटको 'पोट्रेट अफ एडेले ब्लोच' एक सय ३५ मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १९६७ मा बनाइएको उक्त चित्र मारिया अल्टमन्ले सन् २००६ मा रोनाल्ड लउडरलाई बेचेका थिए।
६. फान्सिस बेकनको 'थ्री स्टडिज अफ लुसिन फ्रड' एक सय ४२.५ मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १९६९ मा बनाइएको उक्त चित्र एल्आइन वाइनले सन् २०१३ मा स्टेवेनलाई बेचेका थिए।
७. डवार्ड मुन्चको 'द स्क्रिम' एक सय १९.९ मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १८९५ मा बनाइएको उक्त चित्र पेटर ओस्लेनले सन् २०१२ मा लिअन ब्लाकलाई बेचेका थिए।
८. पिकासोको 'गार्कोन ए ला पाइप' एक सय चार मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। बनाएको मिति थाहा नभए पनि ग्रिनट्रीले सन् २००४ मा बारिल्ला ग्रुपलाई यो चित्र बेचेका थिए।
९. भिन्सेन्ट भ्यान घोघको 'पोट्रेट अफ डाक्टर गचेट' ८२.५ मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १८९० मा बनाइएको उक्त चित्र सिग्फाइड क्राभस्कीले सन् १९९० मा रुओई ग्रुपलाई बेचेका थिए।
१०. पियेरे अगस्ट रेनिअरको 'बाल दु मोउलिन डे ला गलेट्टे' ७८.१ मिलियन डलरमा बिक्री भएको थियो। सन् १८७६ मा बनाइएको उक्त चित्र बेट्से ह्विट्नीले सन् १९९० मा रुओई साइतोलाई बेचेका थिए।
मिति : २०७० माघ २५
Labels: किरण मानन्धर, दुर्गा बराल वात्सायन, संगीता थापा
हरियाली गुमाउँदै महानगर
उजाड बन्दै गएको राजधानीको सिनामंगलस्थित शान्तिस्तूप बगैंचा।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले जनसंख्या अनुपातमा हरियाली कायम गर्न सकेको छैन। महानगरपालिकाको १० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र हरियाली छ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेलले जनसंख्या र प्रदूषणअनुसार हरियाली कायम गर्न नसकिएको बताए। ‘भएका बगैंचा पनि उचित व्यवस्थापन र बजेट अभावमा उजाड छन्। न मौसमअनुसारको फूल फुलाउन सकिएको छ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन त वर्षौं लाग्ला।’
महानगरपालिकामा करिब ३० लाख जनसंख्या छ। पोखरेलले भने, ‘बढ्दो जनसंख्याअनुसार बगैंचा र हरियाली कायम गर्न सकिएको छैन। राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्ने हो भने जम्मा क्षेत्रफ लको ४० प्रतिशत हरियाली हुनुपर्ने हो।’
उनका अनुसार महानगरभित्र ठूलासाना गरी करिब तीन दर्जन बगैंचा छन्। यसले महानगरको पुगनपुग १० प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको उनको अनुमान छ।
महानगरपालिका कानुन शाखाका प्रमुख वसन्त आचार्यले वातावरण मौलिक हकका रूपमा विकसित भएको जानकारी दिँदै भने, ‘बगैंचा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, कानुनले तोकेको काम नगरेको अवस्थामा किन गरिनस् भनेर अदालतमा प्रश्न उठाउन सक्नेसम्मको प्रावधान छ।’
कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले नगर क्षेत्रभित्र ४० प्रतिशत हरियाली बनाउनुपर्ने प्रावधानअनुरूप प्रयासरत रहेको बताए। महानगरलाई हरियाली बनाउन घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा दुईवटा रूख रोप्नुपर्ने नियम बनाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हरियाली बढाउन महानगरपालिकाले कौसीमाथि पनि सहरी कौसी खेतीको प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं।’
‘सरकारले न वित्तीय हस्तान्तरण गर्छ न सरकारी जग्गाको भोगाधिकार नगरपालिकालाई दिन्छ’, अर्यालले भने, ‘नगर विकासको जिम्मा थुप्रै सरकारी निकायलाई बाँड्दा वा नगरपालिकालाई मात्र नदिँदा पनि हरियाली कायम गर्न समस्या भएको छ।’
महानगरमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत हरियाली कायम गरेको दाबी गर्ने उनले भने, ‘४० त सम्भव नहोला, २५ प्रतिशत पुर्‍याउन सके पनि राम्रो हुन्थ्यो।’
वातावरणविद् डा. तोरण शर्माले पूर्वयोजनाबिना बनेको महानगरपालिकामा आवश्यक हरियाली कायम गर्न सम्भव नभएको बताए।
उनले भने, ‘जनसंख्या र प्रदूषणअनुसार हरियालीको अनुपात कायम गर्नुपर्ने हो तर अहिले सम्भव छैन।’ उनका अनुसार सरकारले नगर विकास समितिमार्फत जग्गा एकीकरण आयोजना, ढल, पानी, टेलिफोन, बिजुली, हरियाली, खुला स्थान आदि तय गरेर काम गरेको भएमात्र हरियाली सम्भव थियो।
उनले नगरोन्मुख गाविसलाई बेलैमा योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्न सके हरियाली सहर बनाउन सकिने बताए।
मिति : २०७० माघ २६, आइतबार
झापा विद्रोहको पुस्ताबाट नेतृत्व हस्तान्तरण धेरै जटिल छ
सफ्टवेयर कम्पनी खोल्ने तयारीमा छौं
होनोलुलुमा गुञ्जियो सितार
एथलेटिक्स संघको अध्यक्षमा तीनजनाको उम्मेदवारी
नापनक्सापछि स्थानीय आन्दोलित
महानगरको सबै जानकारी मोबाइलमा
टरेको छैन कालो सूचीको खतरा
पर्वतमा सडक मर्मतका नाममा भ्रष्टाचार
ह्विलचियरबाट केसीले भने- बिरामीलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नू
प्रकोपको क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रवाह गरिने
१३ वर्षीयाद्वारा मण्डपमै विवाह अस्वीकार गरेपछि...
यौनशोषण गर्ने पूर्वसभासद्लाई सात वर्ष कैद
डा. भगवान कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत
इप्रकाले नसुने, जिप्रकालाई फोन
जुवा खालबाट फोरम नेता सहित १३ जना पक्राउ
नौविसे-पिप्लामोड सडकमा दैनिक ८ घण्टा गाडी चलाउन रोक
पाल्पा दुर्घटनाका घाइतेको बयान: बस बिग्रिएको थियो
Bus Chadhna Hairan
Bagmati ma Phohor Phalne Pakrau
Bagmati ma Phohor Garne Pakrau बागमतीमा पिसाब गर्ने पनि पक्राउ
काठमाडौं : बागमती नदी सरसफाइ अभियान चलिरहेका बेला तिलगंगा आँखा अस्पतालले नदीकिनारमा फोहोर फालिरह्यो। सूचना पाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ गर्‍यो र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो।
सिनामंगलकी शोभा खड्का चिया पसलमा भाँडा माझेको पानी नदीमा फाल्थिन्। महानगरपालिकाले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना तिराएपछि उनले फोहोर मिसाउन छोडिन्।
हिँड्दै तीनकुने पुगेका जडीबुटीनिवासी सिन्धुपाल्चोक साँगाचोकका गिरी थरका २७ वर्षीय एक युवकले बागमती नदीमै पिसाब गरे। प्रहरीले देखेपछि उनी पक्राउ परे। आइन्दा नदीमा फोहोर नगर्ने निवेदनसहित बिलबुक र लाइसेन्सको फोटोकपी छोडेर उनी छुटे।
बागमतीमा फोहोर गर्नेलाई सरकारले कारबाही गरिरहेको छ। अभियानको ४० सातासम्म महानगरपालिकाले ११ जनालाई कारबाही गरी ७८ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुलेको छ। फोहोर गरेबापत कार्यालय तथा सर्वसाधारणले पाँच सयदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिरेका छन्।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ मा नदीमा फोहोर गर्नेलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँ वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठका अनुसार फोहोर फाल्नेलाई पक्राउ गरी फोहोरको मात्रा र प्रकारका आधारमा जरिबाना तोकिन्छ। श्रेष्ठले भने, 'मोटरसाइकल र कारमा लगेर नदीमा फोहोरका पोका फाल्ने पनि धेरै छन्।'
महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत भदौ ८ गते कृष्ण खत्रीलाई बागमतीमा फोहोरको पोको फालेबापत पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको थियो। १० गते गाडीका काम नलाग्ने सामग्री नदीमा फालेका राजेश श्रेष्ठलाई १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको थियो। सुकमान तामाङले पनि काठका काम नलाग्ने टुक्रा फालेबापत १५ गते एक हजार जरिबाना तिरेका थिए।
तिलगंगा आँखा अस्पतालले पनि दैनिक नदीमा फोहोर फालेको थाहा पाएपछि महानगरपालिकाले ३० हजार रुपैयाँ तिराएको छ। कात्तिक २ गते कार हाँकिरहेका ध्रुव खनालले गाडीबाटै फोहोर फालिरहेको देखेपछि उनलाई पक्राउ गरी १० हजार जरिबाना तिराएर छोडियो।
मेघराज गुरुङले पनि गाडीबाटै नदीमा फोहोर फालेका कारण पाँच हजार जरिबाना तिर्नुपर्‍यो। ट्याक्टरबाट बागमतीमा फोहारे फाल्दै गरेका हरिशरण महतले पनि पाँच हजार तिरे।
बागमतीमै फोहोर फाल्दै गर्दा माघ १७ गते ज्योति प्रसार्इं पक्राउ परिन् र तीन हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेर उम्किइन्। गत शनिबार पनि दिलकृष्ण श्रेष्ठ र शोभा श्रेष्ठले बागमतीमा फोहोर फालेबापत क्रमश: पाँच हजार र एक हजार पाँच सय जरिबाना तिनुपर्‍यो।
फोहोर फाल्नेको अनुपातमा महानगरपालिकाले गरेको कारबाही संख्या भने न्यून छ। विभागका प्रमुख साधुराम भट्टराईले भने, 'फोहोर फाल्नेहरूको संख्या यतिमात्र होइन। तर हामीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा पक्राउ परेका मात्र कारबाहीमा परेका हुन्।'
बागमतीको निगरानीका लागि सादा पोसाकमा प्रहरी पनि खटिएका छन्। सफाइ अभियान ४० औं सातामा चलिरहेको छ।
मोडेल अस्पताललाई ५० हजार जरिबाना
महानगरपालिकाले बागबजारस्थित काठमाडौं मोडेल अस्पताललाई सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फालेबापत ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्न सोमबार पत्राचार गरेको छ।
महानगरको वडा नम्बर १९ र २१ को सीमामा पर्ने मचलीमा पटकपटक फोहोर फालेको प्रमाणित भएपछि तीन दिनभित्र जरिबाना तिर्न महानगरले मोडेललाई पत्राचार गरेको हो। फोहोरको पोकामा अस्पतालका कागज भेटिएपछि महानगरले अस्पताललाई जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको वातावरण प्रशासन महाशाखा प्रमुख हरि कुँवरले बताए।
मिति : २०७० माघ २२, बुधबार
त्रिचन्द्र क्याम्पस भवन खाली गर्न महानगरपालिकाको ताकेता
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐतिहासिक सम्पदा रानीपोखरी परिसरका महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, त्रिचन्द्र क्याम्पसलगायतका भवन हटाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले ती संरचना हटाउने वा खाली गराउने निर्णय आइतबार गरेको हो। अदालतले रानीपोखरी परिसरका भौतिक संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो।
फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाका बोर्ड प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालको सभापतित्वमा सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो। बैठकमा उपस्थित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिलाई अर्यालले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा पुरातत्त्व विभाग र त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रतिनिधि उपस्थित थिए। बैठकपछि अर्यालले भने, 'महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, त्रिचन्द्र क्याम्पस, कानुन सुधार आयोग, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको भवन हटाउन सोमबारदेखि पत्राचार गर्छौं।'
पछिल्ला दिनमा आयोग पुस्तकालयमा परिणत भएको छ भने एसोसिएसनको स्थानमा इन्जिनियरिङ श्रीमती संघको कार्यालय छ। २०६६ सालमा अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्न ०६७ मा महानगरपालिका, संस्कृति र स्थानीय विकास मन्त्रालयले रानीपोखरीसम्बन्धी 'कार्ययोजना' बनाएका थिए। कार्ययोजना स्थानीयले स्वीकृत गरेको थियो। कार्ययोजनामा केही भवन हटाउने र केही खाली गराउने उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले कार्ययोजनाअनुसार रानीपोखरी दक्षिणका होर्डिङ बोर्ड, महानगरको शौचालय हटाइसकेको जानकारी कानुनअधिकृत वसन्त आचार्यले दिए।
एसोसिएसनको कार्यालयसमेत सरिसकेको छ। हाल पुस्तकालय रहेको भवनलाई कार्ययोजनाअनुरूप ऐतिहासिक पुस्तकालय बनाउने र त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई ऐतिहासिक संग्रहालय बनाउने योजना छ।
महानगरपालिकाले तीन वर्षअघि पनि सम्बन्धित पक्षलाई भवन सार्न वा छोड्न पत्राचार गरेको थियो। सबै कार्यालय हटाएर संरक्षण गरे युनेस्कोले रानीपोखरीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने आश्वासन दिएको छ।
महानगरले ताकेता गर्ने र त्यति गर्दा पनि नमाने केन्द्रीय निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी अर्यालले दिए। उनले भने, 'निरन्तरको ताकेता पनि नमाने केन्द्रीय निर्णयमार्फत अघि बढ्छौं।' रानीपोखरीवरिपरिको बाटोभित्र पर्ने सबै संरचना रानीपोखरीकै स्वामित्व रहेको सर्वोच्चको निर्णय छ।
पुरातत्त्व विभागले स्वीकृति नदिए पनि २०६३ मंसिरमा प्रहरी आयुक्तको कार्यालय जबरजस्ती बनाइएको थियो। त्रिचन्द्र क्याम्पस हटाउने बारेमा यसअघि पनि वार्ता र छलफल भएका थिए। क्याम्प प्रमुख हरि थपलियाले ऐतिहासिक क्याम्पस भवन हटाउने वा छाड्ने निर्णय राज्यले गर्नुपर्ने जबाफ महानगरलाई दिइएको जानकारी दिए।
'हामीले व्यवस्थापन समिति र कार्य समितिको बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं', थपलियाले बैठकपछि भने। पुरातत्त्व विभागका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत सुरेशसुरज श्रेष्ठले महानगरपालिकाको कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्न विभाग तयार रहेको बताए।
मिति : २०७० माघ २०, सोमबार
Labels: काठमाडौं महानगरपालिका, त्रिचन्द्र क्याम्पस, लक्ष्मण अर्याल, सर्वोच्च
Labels: Bhagawati Shah, Dhruba Ratna Sthapit, Dil Bahadur Ranabhat, gopi krishna dhungana, Tilganga Aspatal
Solar ma Ujjyalo Mahanagar
Bagmati ma Phohor Garne Pakrau बागमतीमा पिसाब गर्न...
त्रिचन्द्र क्याम्पस भवन खाली गर्न महानगरपालिकाको त...